ခင်ဆွေဦး ● ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်သူရ – MoeMaKa Burmese News & Media
April 4, 2019 Aung Htet
အဲဒီတုန်းက ကိုကိုရွှေက အသက်၂၄ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ရာထူးက ဗိုလ်မှူးဖြစ်နေပြီ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အနားမယူ ဘဲ လေ့ကျင့်တယ်။ ဝိရိယကောင်းသလား မပြောနဲ့။ ဦးလေးဘသိန်းက ကိုကိုရွှေဝိရိယကို လိုက်မမီတော့ …
ကိုကိုရွှေက စည်းကမ်းကြီးတော့ဘယ်သူမှ ပြောရဲတာ မဟုတ်ဘူး။ ဦးလေးဘသိန်းက Mess (ထမင်းစားခန်း) မှ တဖက်ခန်း မှာရှိနေတဲ့ ကိုကိုရွှေ မကြားကြားအောင် ပြောနေတာလေ။ ကျွန်မကတော့ ကိုကိုရွှေ လှုပ်ရှားသွားလာသမျှ စိတ်ဝင်စားတာ၊ ပထမဦးဆုံး ကျွန်မတို့တည်းခိုတာ ဘီဘီစီက ဦးလေးဦးတင်မောင်ကြီးအိမ်။ ကျွန်မတို့ သားအမိရယ်၊ မမ မကြင်စိန်ရယ် သစ်သားတန်းလျားရှည် အိမ်ကြီး၊ ဘိုတဲနှင့်တူတယ်။ ကျွန်မပြတင်းပေါက်နား နတ်သမီးပုံပြင် Fairy Tale ဖတ်နေတုန်း ကိုကိုရွှေက ဗြုန်းဆို ကျွန်မတို့ညီအစ်မရယ် မမ မကြင်စိန်ထိုင်နေတဲ့နား မြင်းစီးရင်း ရောက်လာပြီး ….
ဦးလေးဘသိန်းက ပျော်တတ်တော့ …
ဒီအကြောင်းအရာတွေ ကျွန်မ မမေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်မ စစ်ပြီးစ အသက်အရွယ်ကြီးပြင်းလာတော့ ကိုကိုရွှေဟာ ဝိညာဉ်ချင်း ဆက်စပ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်လာတာ “ဒို့တိုင်းဌာနီ” မှာ တွေ့ရမှာပင်။ ဒါကြောင့်လည်း ဦးလေးဘသိန်းက ကိုကိုရွှေ့ ကို မီးရထားခေါင်းတွဲကြီးရယ်လို့ပြောတာကိုး။ ကိုကိုရွှေ ကျွန်မတို့ကို သူ့အိမ်ခေါ်ထမင်းဖိတ်ကျွေးတော့ မေမေနှင့် ကိုကို ရွှေဟာ စာအကြောင်း နိုင်ငံရေးအကြောင်းပါ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ကိုကိုရွှေက ဖေဖေစာတွေအကြောင်းပြောရင်း …
ထမင်းဝိုင်းမှာ ကိုကိုရွှေနှင့် မေမေစကားလက်ဆုံပြောမကုန်။ ဒါတွေအားလုံး ကျွန်မ တိုက်ရိုက်မှတ်မိတာထက် မေမေက ပြန်ပြန်ပြောလို့ သိခွင့်ရတာပါ။ ပဲခူးစံပြတပ်မှာ မေမေနှင့် ကိုကိုရွှေရင်းနှီးမှုဟာ ပို၍ ပို၍ နီးစပ်လာပါတယ်။ ကိုကိုရွှေဟာ မေမေ့ရဲ့ဟီးရိုးပါ။ ကျွန်မကလည်း ပဲခူးမြို့မ ခဝဲခြံအရပ်ရပ် လှပခံ့ညားတဲ့ မြင်းညိုကြီးစီး လှည့်လည်တာ မမေ့။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်မတို့ဦးလေး ဦးတင်မောင်ကြီးနှင့် အန်တီငြိမ်းတို့အိမ် ညပြန်လာအိပ်တဲ့အခါ ကျွန်မတစ်ရေးနိုး မနက် ၃ နာရီထ အပေါ့ အပါးသွားချိန် …
ကျွန်မတို့ ရန်ကုန်ပြန်ခါနီး ကိုကိုရွှေက မေမေ့ကိုကန်တော့ပြီး ကျွန်မတို့ညီအစ်မက ကိုကိုရွှေ့ကို ကန်တော့ပါတယ်။ ကိုကို ရွှေက ကျွန်မခေါင်းကို လက်နှင့်သပ်ပြီး …
အသားလတ်လတ်၊ အရပ်မြင့်မြင့် (ခြောက်ပေနီးပါး) မျက်ခုံးကောင်းကောင်း၊ မျက်လုံးအရောင် တောက်တောက် ကိုကိုရွှေ ကိုမြင်ဖူးတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေက ကိုကိုရွှေကို အမေရိကန်ဇာတ်လိုက်မင်းသား ဂရေဂိုရီပက် (ခ်) နှင့် ဘယ်သူပိုလှသလဲ အငြင်းအခုန် ပြုကြပါတယ်။ မေမေက ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကို ဝင့်ဝင်ကြွားကြွား ပြောကြားပါသေးတယ်။ ကိုကိုရွှေက သုံးဆယ်သားမို့ ….
← ကောကော် ● ကယားပြည်နယ်မှ ရေရှားပါးမှုပြဿနာနှင့် အမျိုးသမီးများဘဝ
မင်းကိုနိုင် ● အခါ →